Tetikasa Airbus A321 fitaovana nakatona rehefa ny fiaramanidina
fanontaniana Tetikasa Airbus A321 fitaovana nakatona rehefa ny fiaramanidina
2 taona 2 andro lasa izay #223 by JanneAir15
Salama! No alaina ny Airbus A320 Fianakaviana Mega Pack. Efa nizaha toetra ny rehetra modely (A318, A319, A320, A321) Fa rehefa lasa ny fiaramanidina tamin'ny A321 ny fitaovana nakatona avy hatrany rehefa mahazo kodiarana hiala ny tany. Hafa fiaramanidina io fonosana tsy manana izany olana izany ihany ny A321. Efa nanaraka ny lisitra ary dia nitodika ny fitaovana eo amin'ny fomba marina. Tsy fantatro ny ratsy avy eo. Mba ampio aho amin'izany.
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: joval
2 taona 2 andro lasa izay #224 by Gh0stRider203
Tsy afaka manao zavatra maro araka izay aho eo afovoan'ny iray fiaramanidina rehefa miteny (LFRG - KDFW) ao amin'ny 747-400LCF, fa indray mandeha aho tanety izy, misintona izany aho ka hojerentsika izany.
Misaotra anareo nandray: 5
2 taona 1 andro lasa izay #225 by Tonny0909
Tsy maintsy hametraka ELAC2 Off amin'ny FLT CTL- upperhead fizarana amin'ny tontonana. Ento ny telo hafa. (Sec 2,3 sy FAC2)
Ary hianatra Airbus sidina lalàna:
Manaraka mpisera (s) nanao hoe: Misaotra: Gh0stRider203, JonesyMcJonesFace
2 taona 1 andro lasa izay #226 by JanneAir15
Misaotra indrindra anao! Aho hizaha toetra izany.
2 taona 1 andro lasa izay #227 by JanneAir15
Tsia, tsy niasa. Mbola nahazo ny fahadisoana ihany "Generator 1, Generator 2 sy Hydraulics 1 # 2" dia marika mena eo amin'ny Info fampisehoana.
2 taona 1 andro lasa izay #228 by JanneAir15
Tsy misy ilaina ny hanampy intsony! I raikitra ny olana. Tonny0909 ianareo, dia marina fa ELAC2 no hany FLT CTL hivadika tsy maintsy manana eny. Switches hafa tsy maintsy teo! (Anisan'izany ny ankavia fizarana ny upperhead tontonana) Izany no izy! Fa misaotra anao noho ny fanampiana Tonny0909.
2 taona 1 andro lasa izay #229 by Tonny0909
Eny ary hoy aho fa eo amin'ny ato ny lahatsoratra nadika:
"Ento ny telo hafa. (Sec 2,3 sy FAC2)"
Izy ireo dia eo rehefa "off" tsy voalaza.
2 taona 1 andro lasa izay #230 by Dariussssss
Faly ny mahita ity iray ity voavaha. Raha toa ka mila na inona na inona intsony, dia aoka isika mahalala.
2 taona 1 andro lasa izay #234 by Gh0stRider203
Dariussssss nanoratra: Faly ny mahita ity iray ity voavaha. Raha toa ka mila na inona na inona intsony, dia aoka isika mahalala.
I faharoa izany!
Goavana misaotra anao Tonny0909 noho ny fanampiany!
Fotoana mamorona pejy: 0.288 segondra